Babilon ahwease (1-15)
Wɔn a wɔhwɛ nsoromma mu ho ada hɔ (13-15)
47 Si fam na bɛtena mfuturu mu,O Babilon babea, ɔbaabun.+ Tena fam, baabi a akongua* nni.+O Kaldeafo babea,Efisɛ nkurɔfo renkorɔkorɔ wo, na wɔrennyigye wo so bio da. 2 Fa ɔbo* na yam hwiit. Yi ade a ɛkata w’anim no. Yi wo fam ataade ma wo nan ho ngu hɔ, Na twa asu no. 3 Wobeyi w’adagyaw so. Wobehu w’animguase. Metua wo ka,+ na onipa biara rentumi nsiw me kwan.* 4 “Yɛn gyefo no,Asafo Yehowa ne ne din;Ɔno ne Israel Kronkronni no.”+ 5 Tena hɔ dinn, na kɔ sum mu,O Kaldeafo babea;+Wɔremfrɛ wo Ahenni ahorow so Ɔhemmaa* bio.+ 6 Me bo fuw me man.+ Miguu m’agyapade ho fĩ,+Na mede wɔn hyɛɛ wo nsa.+ Nanso woanhu wɔn mmɔbɔ.+ Mpanyimfo mpo, wode kɔndua a emu yɛ duru too wɔn so.+ 7 Wokae sɛ: “Mɛyɛ Ɔhemmaa* daa.”+ Woannwen nea na woreyɛ no ho,Na woanhwɛ nea ɛbɛkɔ akowie. 8 Afei tie eyi, wo a wopɛ anigye+A wɔabɔ wo ho ban, wo a woka wɔ wo komam sɛ: “Obiara ne me nsɛ. M’akyi no, obiara nni hɔ bio.+ Merenyɛ okunafo, Na me mma renwu da.”+ 9 Nanso nneɛma abien yi bɛba wo so prɛko pɛ; ɛbɛba da koro:+ Wo mma bewuwu na wobɛyɛ okunafo. Eyinom nyinaa bɛba wo so,+Efisɛ* w’asumansɛm dɔɔso, na wo kaberɛkyere ano yɛ den.+ 10 Wode wo ho too wo bɔne so. Wokae sɛ: “Obiara nhu me.” Wo nyansa ne wo nimdeɛ na ama woayera,Na woka wɔ wo komam sɛ: “Obiara ne me nsɛ. M’akyi no, obiara nni hɔ bio.” 11 Nanso mmusu bɛba wo so,Na wo nnurusɛm no biara rentumi nsiw ano.* Amanehunu bɛba wo so, na worentumi nsiw no kwan. Ɔsɛe a wunhuu bi da bɛba wo so prɛko pɛ.+ 12 Afei kɔ so, yɛ wo kaberɛkyere na di w’asumansɛm bebrebe no,+Nea wufi wo mmofraase abrɛ ho no. Ebia ɛbɛboa wo;Ebia wode bɛbɔ nkurɔfo hu. 13 W’afotufo bebrebe no ama woabrɛ. Ma wɔnsɔre seesei ara na wommegye wo,Wɔn a wɔsom ɔsoro abɔde,* wɔn a wɔhwɛ nsoromma mu,+Wɔn a wɔhwɛ asram foforo,A wɔka nea ɛbɛba wo so no. 14 Hwɛ! Wɔte sɛ aburow dua. Ogya bɛhyew wɔn. Wɔrentumi nnye wɔn ho* mfi ogya a ɛredɛw denneennen no mu. Eyi nyɛ nsramma a wɔde ka wɔn ho hyew,Na ɛnyɛ ogya a wɔtena ho. 15 Eyi na ɛbɛto wo kaberɛkyerefo no,Wɔn a wo ne wɔn abrɛ fi wo mmofraase no. Wɔde wɔn ti bɛpempem; obiara bɛfa ne kwan.* Obiara nni hɔ a obegye wo.+
^ Anaa “ahengua.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “na merennya obiara ho koma.”
^ Anaa “Awuraa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Ɛmfa ho sɛ.”
^ Anaa “Na worenhu kwan a wobɛfa so de wo nnurusɛm no asiw no kwan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔn a wɔkyekyɛ ɔsoro mu; Nsoromma mu ahwɛfo.”
^ Nt., “obiara akɔ n’asaase so.”